Akụkọ - Otu nwata nwoke dị afọ 10 si Chula Vista na-eme mmemme inweta ụkwụ ọhụrụ na-agba ọsọ prosthetic
Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-emega ahụ́ enwetala ohere ọhụrụ ha ga-eji na-emega ahụ́. The Challenge Athlete Foundation kwadoro ụlọ ọgwụ na-agba ọsọ na Mission Bay n'ụtụtụ Satọde. Enwere ndị egwuregwu afọ niile. Ọtụtụ bụ ụmụaka, ndị e bepụrụ ụkwụ ha ma ọ bụ bụrụ ndị a mụrụ na-enwe nkwarụ anụ ahụ.
Ụlọ ọgwụ Satọdee bu ụzọ gosi Jona Villamil dị afọ 10 si Chula Vista ụkwụ ọhụrụ na-agba ọsọ prosthetic. A kwụrụ ụgwọ prosthesis ahụ site na onyinye sitere n'aka Foundation Challenge Athlete Foundation.
Obere nkeji ole na ole ka Jona nwetasịrị prosthesis ọhụrụ ya, Jona na ụmụnne ya atọ nọ na-agba ọsọ n'elu ahịhịa.
"N'ihi na ọ na-arịa ọrịa n'ezie, ahụ ya kụdara n'ụjọ septic. Akụkụ ahụ ya dara, ma ha gwara anyị na ọ ka nwere ohere ịlanarị 10%, "Nne John Roda Villamir kwuru.
Jona lanarịrị n'ịkpụgharị ụmị ọkpụkpụ nwanne ya nwoke, ma ọrịa ahụ gburu ọkpụkpụ dị n'ụkwụ Jọn.
“Jona so naanị n'asọmpi jiu-jitsu. Anyị aghọtaghị.' Ahụ́ adị ya mma. Kedu ka ọ ga-esi rịa ọrịa?'" Roda Villamir kwuru.
Nne na nna Jona nwere ala azụ ịchọpụta ụbọchị e bepụrụ ya. Ọ bụ Jona kpaliri ndị mụrụ ya ka ha wepụta ụbọchị a ga-awa ahụ ahụ.
"Ọ chọrọ ya n'ụbọchị ọmụmụ ya. Ọ chọrọ inweta ya na ụbọchị ọmụmụ nwanne ya. Ọ chọrọ ime nke a ka o wee bụrụ onye kacha mma ọ nwere ike ịbụ, "Roda Villamir kwuru.
Na mgbakwunye na ịnweta prosthesis ọhụrụ, ọ natakwara ntuziaka maka otu esi agba ọsọ na ije ije. The Challenged Athletes Foundation enyerela ọtụtụ ndị aka inwe ụkwụ na-agba ọsọ. Nke a bụ ihe mkpuchi anaghị ekpuchi ya yana ọnụ ahịa ya nwere ike ịdị n'etiti US$15,000 na US$30,000.
“Ọtụtụ ụmụaka na-achọ naanị ịgba ọsọ. Ị nwere ike ịhụ. Naanị ihe ha chọrọ ime bụ ịpụ na-arụsi ọrụ ike, na anyị chọrọ inye ha ụzọ ha ga-esi na-arụsi ọrụ ike na ọsọ na ọsọ ha chọrọ, "onye na-ama aka kwuru Travis Ricks, onye nduzi ọrụ nke ntọala ahụ.
N’ihi ọrịa Jona, e nwere ike gbupụ ya ụkwụ nke ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, o gosila na ọbụna mmerụ ahụ kachasị njọ enweghị ike ibelata ya.
Oge nzipu: Nov-11-2021